Torolàlana ho an'ny fanoratana marina ny ao anatin'ilay Diabe Eran-tany
Home » Torolàlana ho an'ny fanoratana marina ny ao anatin'ilay Diabe Eran-tany
1 Torolàlana ho an'ny fampahalalam-baovao, Vaovao, famoahana gazety
1.2 Teny fanalahidy ho an'ny votoaty manoratra
1.2.1 Ahoana no hahafantaranao raha toa ka misy fikarohana atao matetika?
1.3 Titles and Titles
1.4 Fifandraisana amin'ny tranokala hafa
1.6 Youtube video
1.7 Fanamarihana farany
Torolàlana ho an'ny fampahalalam-baovao, Vaovao, famoahana gazety
Ny lahatsoratra dia tsy maintsy manana ny endrika farafahakeliny azo atao, izany hoe tsy maintsy ho tsotra indrindra eo amin'ny ambaran'ny singa miavaka. Izany hoe, aza mampiasa tarehimarika vitsivitsy. Ampiasao ihany ny habaka fanalahidy.
Ny zavatra marina dia ny hoe ny lahatsoratra ihany no mitondra:
Negritas: hanasongadina ireo hevi-dehibe
nampiana: ny fepetra takiana farafahakeliny, ho an'ny fanendrena na teny amin'ny fiteny hafa.
lisitra: azo alaina na tsy voaisa izy ireo. Lisitra tsotra, miaraka amin'ny isa na tarehimarika avy amin'ny 1.
To avoid: marinisa, lokon'ny soratra, sns ...
Raha voasoratra ao amin'ny Word na ao amin'ny Google Docs ny lahatsoratra, ilaina ny manova azy io amin'ny format HTML alohan'ny alokony amin'ny Internet. Noho izany dia tsy maintsy mampiasa fitaovana toy ity ianao: https://word2cleanhtml.com. Mametraka ny lahatsoratra rehetra ao amin'ny Word na Google Docs izy ary mamerina ny lahatsoratra amin'ny HTML. Avy eo dia ampidirina ao amin'ny tabilao fanontana HTML ao amin'ny WordPress ity lahatsoratra HTML ity:
Teny fanalahidy ho an'ny votoaty manoratra
Io angamba no sarotra indrindra amin'ilay mpitari-dalana content writingIzany no antony hanolorako zavatra iray araka izay azo atao ary izany dia tokony hatao araka izay azo atao. Ny teny fanalahidy dia andalana eo anelanelan'ny 2 sy 5 izay tena mahavariana ary averimberina matetika ao amin'ilay lahatsoratra. Ohatra: raha miresaka momba ny "olona ao La Coruña"Ary Ity andian-teny 5 ity dia mety ho kandidà amin'ny teny fototra ao amin'ny lahatsoratra. Raha ny marina dia mety ho ampy ny "rojo olombelona" amin'ity ohatra ity. Amin'ny ankapobeny, ny tsara indrindra dia ny teny hoe zavatra ho zavatra tadiavin'ny olona matetika amin'ny Google.
Ahoana no hahafantaranao raha toa ka misy fikarohana atao matetika?
Ampiasao ny fitaovan'ny Word Tracker: https://www.wordtracker.com/search (tsy maintsy apetraka ao amin'ny Territory, Espana) Rehefa manana valiny, dia ny fikarohana 10 izany, dia ampy. Ary aza mampiasa teny iray tsy dia misy dikany loatra, ohatra: "fandriampahalemana". Raha tsy afaka mampiasa Wordtracker intsony ianao noho ny mihoatra ny fetra fikarohana, dia afaka manandrana ihany koa ianao Übersuggest.
Raha ny tokony ho izy dia tokony hanana valiny izany fa ny vokatra ratsy eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 500 dia mety. Ohatra: ny "martsa manerantany" dia ampy, tsy be loatra satria 10 ihany no ilaina, fa ampy:
Etsy andaniny, tena ratsy ny «fandriampahalemana», «fitiavana», ... satria manana isa be loatra izy ireo, tsara lavitra ny 500:
Fantatro fa indraindray sarotra ny mahita teny iray mifanaraka amin'ireo fepetra ireo. Raha tsy mahita izay mifanaraka amin'izany ianao dia tsy misy zava-mitranga.
Ny tanjona dia ny mametraka ity teny fanalahidy ity fara fahakeliny 2 ao amin'ny lahatsoratra tsy manisa lohateny, na toro-hevitra hafa izay hosoratako etsy ambany. Iray amin'ny famerimberenan'ity tenifototra ity, tokony ho sahy.
Ny anaram-boninahitra (ny iray izay miseho eo amin'ny boaty etsy ambony) dia tsy maintsy manana ny endrika 50 sy 75. Ary tokony ampidirinao ny teny fototra. Izany no antony mahatonga azy ho tsara hevitra hisafidianana ny teny fototra, mijery ny lohateny
Zava-dehibe ny manana lohateny maromaro, fara fahakeliny iray amin'ny lohateny faha-2 (Lohateny 2 amin'ny Teny). Ny tsara indrindra dia tokony hanana 1 na maromaro 2 sy 3.
ihany koa It is recommended asio Subtitle amin'ny fizarana ambanin'ny lohateny lehibe izay milaza hoe "Ampidiro dikanteny eto".
Ny habetsaky ny dikanteny dia mety malalaka, ary tsara kokoa ny endriny 121 sy 156, satria hampiasa ny famaritana Meta izy io. ihany koa tsy maintsy ampidirina koa ny teny fototra.
Ary farany, tsy maintsy raisina fa ny mpihazona 3 (H3) dia tsy maintsy manana H2 etsy ambony ary tsy maintsy misy mpihazona H1 farafaharatsiny hanome izany ambaratongam-pahefana izany. H2> H2> H3.
Noho izany, raha jerentsika ny baikon'ny tompon'ny raha toa ka manana ohatra ireo didy telo isika
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: Mety ho diso izany satria ny H4 dia tokony hialoha lalana H3 iray.
H3 - H2: Mety tsy mety izany, satria ny H3 dia tsy maintsy narahin'ny H2 taloha
H3 - H3 - H3: Mety ho ratsy izany satria tsy maintsy H2 farafaharatsiny
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3. Mety ho tsara kokoa satria ny baikon'ny hierarchical dia voahaja.
Farany, tsy maintsy mandeha ny tenimiafina, ao amin'ny 1 ny lohatenin'ny votoatiny (tsy mampaninona raha ao amin'ny Title 2 na Lohateny 3).
Fifandraisana amin'ny tranokala hafa
Andramo tsy hampiasa rohy miseho, afa-tsy 2 isaky ny lahatsoratra indrindra, na dia 1 tsara kokoa aza.
Raha tsy rohy ekena amin'ny pejy iray manana laza malaza ** , Wikipedia karazana, gazety mahery na zavatra toy izany, asio rohy NOFOLLOW amin'ny safidy:
Zava-dehibe ny lahatsoratra tsirairay mifandray amin'ny sehatra hafa amin'ny tranonkala. Raha tsy misy ny toerana, dia afaka mampifandray hatrany ny pejy mainty foana ianao.
Ohatra: “Amin'ny farany Martsa izao, afaka nanatrika izahay… ”
Ao amin'ny rohy anaty, aza mametraka ny NOFOLLOW.
** Raha tsy fantatrao raha manana laza ianao na tsia, midira https://www.alexa.com/siteinfo ary apetraho ny URL an'ny sehatra, ohatra "today.es".
Raha toa ianao ambany ny 100.000 amin'ny Global Rank, dia tsy mila mametraka ny NOFOLLOW ianao. Fa raha izany ambony, Eny, mila ilainao izany.
Alohan'ny hampiakarana sary iray dia tadidio ireto fotokevitra ireto:
Tokony ho tsotra ny anaran'ilay sary, raha tsy hoe "ñ" (manova ny ñ for n), tsy misy accents, ary raha misy habaka, dia amboary amin'ny hyphens izy ireo.
Rehefa mampiditra ny sary ianao, dia tsy maintsy mameno ny saha misy ny lohatenin'ny lohateny, Alternative momba ny safidy. Azonao atao ny mametraka izany ao amin'ny fizarana telo.
Tsy misy sary tokony hihoatra ny 1000 px amin'ny sakany.
ihany koa Ilaina ny mametraka sary ankapobeny. Raha mametraka sary ianao ao anaty lahatsoratra dia aza mampiasa sary mitovy toy ny Image Featured. Tsara kokoa raha tsy misy sary ao anaty lahatsoratra, fa tsy misy sary miavaka. Ao amin'ny lohateny, ny lahatsoratra Alternative sy ny famaritana ny sary voafantina, Ilaina ny mametraka ny teny fototra.
Ny haben'ny idealy amin'ny sary voafantina dia 960 X 540 na lanjan'ny 16: 9. Ny haben'ny sary dia tokony ho eo anelanelan'ny 600px sy 1200px amin'ny sakany.
Ampiasao ity codecode ity:
[su_youtube_advanced url = "https://www.youtube.com/watch?v=MDvXQJgODmA" modestbranding = "eny" https = "eny"]
Manova tsotra izao ny URL, amin'ny iray mifanitsy aminy.
Raha ny zava-misy mahaliana, ity lahatsoratra ity dia manatanteraka ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fanoratana ny votoaty izay efa nolazaiko eto, anisan'izany ny fepetran'ny fikarohana:
Efa niomana aho Lisitry ny PDF Lisitry ny PDF amin'ny lafiny manan-danja indrindra mba tsy hanadino na inona na inona.